REPACTED: Ampiasao Ny Fanabeazana Aizana, Atsaharo Ny Fanilikilihana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Aogositra 2017 20:59 GMT
Hetsika fanaovana asa soa karakarain'ny vondrona Tanora Nakuru isan-taona ny Andriamatoa sy Oliravina Fehilamba Mena, anisan'izany mpikarakara izany ny REPACTED. MCCJEX nanoratra hoe:
Nandefa ny antsipirihany momba ny hetsika ny bilaogy tetikasa REPACTED, ahitana sary izany.
Bilaogera Maureen mitondra ny tsimokaretina VIH, iray amin'ny mpifaninana nizara ny zavatra niainany:
Nanoratra momba ny diany lavabe tao amin'ny REPACTED ny MCCJEX. Nilaza koa izy hoe:
Mshale niresaka momba ny olan'ny fimailo any an-tsekoly:
Collins Otieno Sailas mihevitra fa hampihena ny VIH/SIDA sy ireo aretina hafa tahaka ny IST ny fampiasàna fimailo any an-tsekoly.
Mshale nizara zava-nitranga mampalahelo. Maty ny nenitoany izay namono tena satria voan'ny SIDA. Niangavy izy “atsaharo ny fanilikilihana.”
Elster nanoratra momba ny fomba fanabeazana aizana: